Sheekadii Xiisaha laheyd ee kurbo aduun iyo kadeed caashaq...
Home Love Story Sheekadii Xiisaha laheyd ee kurbo aduun iyo kadeed caashaq Qeybtii 4aad
Sheekadii Xiisaha laheyd ee kurbo aduun iyo kadeed caashaq Qeybtii 4aad
Farxaan markii uu intaa yiri ayaa illin soo dhaaftay, Hooyo Boolo oo garatay in dhibka jira uu weyn yahay ayaa si hadalkooda loo soo dhex gelin markiina inta ay dukaanka albaabkiisa xertay isaga guriga hore u gelisay oo ku tiri.
Ii sheeg Maama maxay tahay guuldarada ku haleeshay halkeesee kaa haleeshay ii sheeg oo igu kalsoonaaw dhibkaaga waa keyga macaane.
Maama jaceyl aan muda qarsaneyey ayaa aniga oo aan hadlin soo idlaaday
Kuma fahmin wiilkeyga bal hadalka ii kala dhig dhig
Hooyo Fartuun ayaan in muda ah qalbigeyga la haayey waxaana uu aaminsanaa in ay tahay gabadha kaliya ee nolosha ila qeybsan karta laakiin Maama waa guuldareystay.
Hooyo ii sheeg Miyaa la guursaday
Maya Hooyo laakiin wiil kale ayaa ay la socotaa oo ay waliba guurkiisa hamisay
Hooyoo waxaad isu niyad jebisa ma jiraan raga waa tartamaan haddiiba aysan nin xilihiisa aysan noqon hooyo ha niyad jebin fursadana waa ay kuu furan tahay.
Hooyo Ayaanle waa nin ay ku faraxsan tahay marka sideen farxadeeda u dhantaalaa aniga oo waliba ah qofka kaliya ee ay ku kalsoon tahay oo arrin aysan familka u sheegin ii sheegata maya hooyo aniga tani waa ay ii qorneyd in aan ku noolaado laakiin iyada farxadeeda marnaba ma qaribaayo.
Hooyo I dhageyso aniga kuma dhahaayo farxadeeda qarib qofka ku jecel ayaa farxad ku siin kara adigana waad jeceshahay marka waxba ha is cadaabin ee u sheego jaceylkaaga waa intaas oo ku ogolaato.
Maya Hooyo waa waxa kaliya ee aan marnaba qirin doonin jaceylkeeda god ayaan la galayaa
Farxaan markii uu intaa yiri ayaa uu suuliga beegsaday hooyadii oo ka soo daba istaagtay ayaa tiri
Haddii aadan dooneynin in aad dhibkaaga sheegato aniga ayaa u sheegayo
Maya hooyo sidaa ha yeelin waxaa tahay qofta kaliya ee aan u sheegay sababta waad dareemi kartaa waa kalsoonida aan kugu qabo Maama ma doonayo in ay Fartuun arrintaan ogaado mana doonayo in ay ii aragto saaxiib xun ma doonayo in aan waayo saaxibtinamadeeda taa ayaa ii muhiin ah oo aan abid ku noolaanayaa Maama.
Hooyo Boolo waa gareysatay hadalkii wiilkeeda waana ka balan qaaday in aysan Fartuun iskaba daayee aysan jiri doonin cid kale oo ay u sheegto arrinkaan.
Hooyo Boolo waa ay ku qasbaneyd in ay wiilkeeda sida uu rabo ay yeesho waayo isagaa sidaa doonayey Fartuun dhibka heysto Farxaan kama warheyso inta ay la joogtana farxad ayaa uu u muujiyaa mana dareen siiyo dhibkiisa.
Fartuun & Ayaanle xaalkooda waxa uu ahaa mid sareeya wallow habsami socodka uu ahaa mid xagga Fartuun uun ka socday Ayaanle ma noqon mid marnaba daacad u noqdo jaceylka waalan ee ay Fartuun dareemeyso wax walba waqti dhumis ayaa uu ku tilmaami jiray.
Laamanihii nolosha ku midoobay ee Amina Sahra & Sadiiq Xaaji waxay ku noqdeen magaalada London oo ah gooobta ay ka yagleeleen noloshooda cusub waxaase jirtay in Sadiiq hooyadii aysan marnaba la dhacsaneyn guurkiisa Hooyo Baluush wiilkeeda Saadiiq waa curadkeda waxayna laheyd 2 gabdhood & 2 wiil oo isaga ka yaraa laakiin dhamaantood waa ay saaqideen mana noqon kuwa fursada ka faa’ideystay Sadiiq ayaana mar kasta noloshooda kaabi jiray oo dhibkoodana xalin jiray.
Hooyo Baluush waxaa cindiga ugu yaalay in wiilkeeda uu illaawayo haddii uu reer yeesho taa badalkeeda ma dooneynin inuu guursado laakiin hagardaamadaas marnaba kama warhaayo Sadiiq oo aad ayaa uu jeclaa hooyadii weligiis waxay weydiiso hadal kuma soo celin wuxuuna oofin jiray hadalkii aabahii Xaaji Maxamuud Abtitoon oo markii uu arkay sida ay u qalifsan yihiin Baluush iyo ciyaalka marka Sadiiq laga reebo isaga tagay dalka Ingiriska oo uu isaga markii hore keenay wuxuuna noloshiisa ku dhameysatay gabadhiisa Barni oo ku nooleyd magaalada Dimishiq ee dalka Suuriya taa oo ay u dhashay xaaskiisii koowaad oo ka geeriyootay.
Aamina Sahra marki ay London ku noqotay waxay heshay shaqo oo bilaawday kaas oo ay ku heshiiyeen ninkeeda in ay shaqeysan karto Sadiiqna shaqadiisa ayaa uu heystay waxayna ahaayeen lamaano isku faraxsan qofkii arkana ka dheehan karay.
Guurkii Lamaanaha isku faraxsan ee Amina Sahra & Sadiiq waxa uu jirsatay 27 maalmood Amina Sahrana daciiftinimo xagga jirka ah in ay dareento ayey bilaawday mana garan Karin waxa haleelay qof caafimadkeedana ku dadaashana waa ay aheyd waxay beegsatay Dhaqtarkii xaafadeeda Edmunton waxaana loo sheegay in ay ugu wacan tahay nolosha cusub ee jirkeeda ku soo kordhay kaas oo ah in ay uur leedahay aad ayaa ay ugu faraxday Amina waxayna go’aansaday in ay kedis kaga dhigto ninkeeda Sadiiq.
Sadiiq sida caadada ah markii uu xaafada yimid uu dharka bedeshay qubeystay qadeeyey ayaa ay Amina inta ay u dhawaatay isaga oo saloonka fadhiyo warqad farta ka saartay inta uu fiiriyey ayaa uu yiri.
Xabibti waad la socdaa in aan naxdin badan nahay ha iga nixin maxay tahay warqada ii sheeg
Macaane waxba ha cabsan ee gacantaada ku fur
Maya afkaaga iga sheeg waxa warqada ku qoran iyo ujeedkeeda
Geesinimo muuji oo isku kalsoonaaw fur warqada macaane
Sadiiq inta uu warqada qabtay ayaa uu miiska saaray oo ku yiri
Maya ii sheega adiga waan dhiman rabaa inuu wadnaha I istaago ka baqi meysid
Ok macaane waxaad ka cabsata ma jiro waa farxad oo kaliya oo nagu soo kordhay
Ok bal farxada ii sheeg aan kula qeybsadee
Macaane xiriirkeeda ayaa geedkiisa laamo badan yeeshay
Xabibti weligaa waad iga afsoomali badneyd ma anan fahmin si fudud igu dhig
Ok uur ayaan leeyahay
Sadiiq inta sidii ciyaalkii u qeyliuey ayaa uu ku booday Amina oo uu dhunkasho ku waalay markaasuu ku yiri.
Waa wax aan marnaba filaneynin
Maxaa jira macaane maxaa sidaa u leedahay
Waxaan kugu aqaanay in aad aqoonta jeceshahay waxaan is lahaa oo ay ku fikireysaa in ugu yaraan ay 2 sano oo Master degree ah ayaa ay diyaarin doontaa markaas kadib ayaa diyaar u noqon doontaa hooyonimo.
Maya macaane hooyonimada waa nolosha kaliya ee aan u xiiso qabay inkastoo waxbarashadana aad u jeclahay hadana tan ayaa ka qiimo badan ayaan qabaa Alxamdullilaahi in igu filan waan bartay haddii uu culeyskeyga batana waxaan jeclahay in aan shaqada joojiyo si aan nafteyda iyo tan reerkeyga aan muhiimada siiyo macaane.
Macaanto waan kugu amaanan nahay ma filaayo adduunyadaan inuu jiro nin iga nasiib fiican waayo adigaan ku heystaa.
Wax walba waa waxaad u qalantay macaane
Maalintaas farxadaas ayaa lagu wada caweeyey oo sheekada oo dhan waxa uu ahaa nimcada uu illaahey siiyey.
Sadiiq maalintii xigtay markii uu shaqada ka soo rawaxay ayaa uu abaaray xaafadii hooyadii si uu ugu sheego farxada cusub ee ku soo kordhay reerkiisa cusub Hooyo Baluush oo ah qof lacag jecel isla markaana ciyaalkeeda yar yar aan ka dambeyn ayaa markii uu soo galayba kala hor tagtay dhibka ay ku hayaan ilmaha iyo sida uu u badan yahay qarashkooda Sadiiq oo ah nin aqbalay masuuliyada reerkooda ayaa hooyadii u sheegay in wax walba uu isaga uu bixinayo oo aysan isku mashquulin wuxuuna ugu dambeyn hooyadii ku yiri.
Hooyoy arrin aan kugu imid ayaa jirtay oo aan doonayey in aad ogaado
Maxay tahay maama farxad ayaa kaa muuqatee maxaa soo kordhay miyaa lagu dalacsiiyey
Haa hooyo dalacsiin xagga nolosha ayaan helay waana mid muhiimad weyn noo wada leh reer Abtidoon hadaan nahay.
Hooyo maxay tahay taas maba garaninee
Hooyo aabe ayaan noqon doonaa mar dhow Amina uur ayaa ay ii leedahay
Hooyo Baluush oo abidba aheyd balaayo abuur ayaad moodaa in ay tani fursada ugu noqotay biibkii ay u garaaceysay balaayada ayaa la soo booday.
Oo uurka intee ayaa uu ka yimid sow maalmo ka hor lama guursatay mise wax ayaa idiin horeeyey
Sadiiq oo hadalka hooyadii ka yaabay ayaa yiri
Hooyo waa ku side maxay tahay hadalka xun ee aad wado
I faham hooyo waxa aan ku leeyahayna faham maxaa yeelay bil kama badna inta la qabo ama ma dhama marka uurka halkee ayaa uu ka yimid bal ii sheeg mise guurka ka hor ayaad cayaari jirteen.
Hooyo hadalkaaga ma garan maxaad rabtay oo aad ii sheegi laheyd
Maya wiilkeyga waxaan la yaaban nahay sida ay gabartaan uurka ku yeelatay
Hooyo aniga dhan ayad I qastay ii sheeg maxaad I dhihi rabtaa
Hooyo baluush oo fursadeeda ka faa’ideysaneyso isla markaana rabta kalsoonida wiilkeeda in ay hesho ayaa tiri.
Aniga waan ku ogahay wiilkeyga in aad si xun oo illaahey raali ka aheyn aadan naag ku raadineynin maxaa yeelay fursada aad afar ku guursato ayaanba heysataa laakiin wiilkeyga sow lagama yaabo in gabadhaan ay wax noo hoos gelisay oo iyada hore u wadatay wacalka ay sido Sadiiq oo jahwareer taagan ayaa la soo booday.